Logistic Assistant | United Logistics Team Co.,Ltd. ﻿
14.2.2019, Full time , Logistics / Transport
•	မိမိတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရသောလုပ်ငန်းအား ကောင်းမွန်စွာတာဝန်ယူ နိုင်ပြီး သွက်လက်ဖျတ်လတ်သူ ဖြစ်ရပါမည်။
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။
•	Logistics ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
•	မြ၀တီတွင် နေနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
We offer •	Male(1)posts
•	Salary is negotiableWe might provide you with accommodation
Work location Myawady.
Company Industry: Logistic Assistant
Logistic Assistant Logistics & Supply Chain Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon United Logistics Team Co.,Ltd Logistics & Supply Chain Jobs Logistics & Supply Chain Jobs Logistic Assistant Jobs in Myanmar, jobs in Yangon